काँग्रेसमा अन्तर्धात गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? त्यसको छानविन गरौ : डा. यादव पण्डित, पूर्व महामन्त्री, नेविसंघ - Durbin Nepal News
काँग्रेसमा अन्तर्धात गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? त्यसको छानविन गरौ : डा. यादव पण्डित, पूर्व महामन्त्री, नेविसंघ
दूरबिन नेपाल १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:०२
अमेरिका । नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री डाक्टर यादव पण्डितले नेपाली काँग्रेसमा आफ्नै साथिलाई असहयोग गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो त्यस तर्फ पनि छानविन गर्नु पर्ने बताएका छन ।
झण्डै एक दशक देखि अमेरिकामा रहेका डाक्टर पण्डितले आफ्नो फेसबुक पेजमा शुक्रवार स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण जीवन संघर्षमा बिताएका पार्टी कार्यकर्ताहरुले बिद्रोह गर्न पर्ने, चुनावमा आफ्नै सहकर्मी साथिलाई असहयोग गर्न पर्ने बाध्यता किन भैरहेको छ भनेर छानबिन गरे राम्रो हुने थियो कि ?’
काँग्रेसको नवगठित अनुशासन समितिले पार्टी भित्र अन्तरघात बारे उजुरी दिन चैत मसान्त सम्मको सिमा तोकेको छ । अनुशासन समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा विरूद्ध नै उजुरी परेको छ ।
डाक्टर पण्डितले पार्टीको कुनै शक्तिशाली नेता वा गुटको समर्थन प्राप्त नगरेको सामान्य पार्टी कार्यकर्ता वा सुभेछुकले आफ्नै पार्टीको उमेद्वारका बिरुद्द निकै गम्भीर कारण नभईकन लाग्नै सक्तैन भन्दै लेखेका छन्, ‘फेरी आफुलाई मन नपरेको उमेद्वारलाई भोट नदिने अधिकारका लागि पनि नै हो, बर्षौ संघर्ष गरेको, त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यलाई “अन्तरघात” को आरोप सहि होइन, मत विश्वास जितेर आर्जन गर्नु पर्ने कुरा हो, स्वत प्राप्त हुने कुरा हुनु हुदैन ।’
उनले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासन भन्नाले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकले आफ्नै बिबेकले सम्झेको र आफै पालना गर्ने स्वअनुशासन मात्रै हो भन्दै ‘यो कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो सरुवा, बढुवा, घटुआ, निस्कासन वा कहिले काही गरिने सफाया जस्तो हुनु हुदैन ।’ भनेका छन् ।
काँग्रेसले गत निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुमा पार्टीमा अनुशासनहीनता बढेको र चरम अन्तरघातलाई लिने गरिएको छ । त्यसो त नेतृत्वले त्यागी र क्षमतावान कार्यकर्तालाई पाखा लगाउदै उमेदवारको टिकट ‘विक्रि’ गर्दा काँग्रेस इतिहास कै लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको अर्को पक्षको भनाई छ ।
१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:०२ मा प्रकाशित